ဟိုက်ဒရောလစ်တံဆိပျ, ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်, လမ်းညွှန်တိပ် - DEF
1 - စက်ရုံ၏ဝေဟင်ဓာတ်ပုံကို
2 - စက်ရုံ၏ဝေဟင်ဓာတ်ပုံကို
ဂွမ်ဒေါင်း DEF တံဆိပျကို Solutions Co. , Ltd အရာ, 2004 ခုနှစ်တွင်ရှာတွေ့ခဲ့သည် isatechnology enterprise with R&D, production and sales department, manufacturesawide range of hydraulic seals, PTFE products applied to harsh conditions, special custom PU and rubber seals.
ကျနော်တို့ 18 အမျိုးသားရေးတီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားကိုး R & D အပေါ်ထားတဲ့အာရုံ၏ 18 အင်ဂျင်နီယာများ၏လုပ်သားအင်အားနှင့်အတူ R & D Capability ။
ထုတ်လုပ်မှု Capability DEF စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် / စိုထိုင်းဆ PTFE အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်လှစ်ထားသည့်အတွက် 10000 စတုရန်းမီတာစီနှစ်ခုစံအပင်တက်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကျနော်တို့ 1mm ထံမှ 1500mm အရွယ်အစားနှင့်အတူထုံးစံ PTFE / မှ PU / ရော်ဘာဖျံထုတ်လုပ်တင်သွင်းဒေါင်လိုက် / အလျားလိုက် CNC စက်, 2000T ရေနံ pressers, ကွန်ပျူတာ-controlled sintering မီးဖို, PU ချ. စက်, ရော်ဘာရောစပ်စက်, စက် vulcanizing, etc တို့ပါဝင်သည်။
အသားပေးထုတ်ကုန်များ , မြေပုံအညွှန်း , မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Wiper , Ptfe လမ်းညွှန်တိပ် , လမ်းညွှန်တိပ် , လမ်းညွှန် Ring ကို , Piston အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် , GST ,